Luca Toni oo shaaca ka qaaday weeraryahanka uu u baahan yahay Maurizio Sarri xilli ciyaareedka soo socda… (Ma Kane, Icardi, Håland, Werner, mise Jesus?) - Hargeele - Wararka Somali State
Luca Toni oo shaaca ka qaaday weeraryahanka uu u baahan yahay Maurizio Sarri xilli ciyaareedka soo socda… (Ma Kane, Icardi, Håland, Werner, mise Jesus?)
March 26, 2020 7
(Turin) 26 Mar 2020. Xiddigii hore xulka qaranka Talyaaniga una soo ciyaaray in ka badan hal koox ay ugu horeeyaan Juventus iyo Fiorentina, iyo Bayern Munich ee Luca Toni ayaa wuxuu sheegay weeraryahanka uu u baahan yahay tababaraha Juvenus ee Maurizio Sarri xilli ciyaareedka soo socda.
Kooxda Juventus ayaa waxay bar-tilmaameed ka dhiganeysaa in ka badan hal weeraryahan oo ay ka mid yuhiin Harry Kane, Erling Braut Håland, Gabriel Jesus, Mauro Icardi iyo Timo Werner, si ay ugu xoojistaan dhanka weerarkooda xilli ciyaareedka soo socda, sababa la xiriira in da’a ahaan ay sii koroyaan xiddigaha Cristiano Ronaldo iyo Gonzalo Higuain.
Haddaba Luca Toni ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “Tuttosport” ee dalka Talyaaniga wuxuu ku sheegay weeraryahanka uu u baahan yahay tababaraha Juvenus ee Maurizio Sarri xilli ciyaareedka soo socda, wuxuuna yiri:
“Waxaan u arkaa in weeraryahanka ugu fiican magacyadan oo dhan uu yahay Gabriel Jesus, madaama uu yahay ciyaaryahan fiican oo goolal dhalin kara, sidoo kale caawin kara”.
“Arrinta ku saabsan Cristiano Ronaldo, weeraryahanka ku haboon inuu yimaado Juventus ayaa ah Gabriel Jesus, ee ma ahan Harry Kane, tusaale ahaan, sababtoo ah weeraryahan toos ah ma awoodi doono inuu si fudud u fahmo Cristiano, kaasoo kuu damaanad qaadi kara inuu ku dhaliyo 30 gool ama wax ka badan xilli ciyaareed kasta”.
“Gabriel Jesus wuxuu leeyahay tayo kale oo aad u fiican, taasoo ah xawaaraha iyo inuu ka soo dhaqaaqo meel ka baxsan xerada ganaaxa, walina waa 22 jir, Juventus waxay u baahan tahay xiddig da’ayar ah”.
“Harry Kane wuxuu si guud kaga fiican yahay Gabriel Jesus, laakiin xiddiga reer Brazil wuxuu faa’iido u leeyahay kooxda Juventus”.
Shaxda rasmiga ah kulanka galabta ee kooxaha Watford iyo Man United oo la shaaciyey… (Yaa ku soo bilowday kulankan ka dhacaya Vicarage Road?)